किन आउँछ यौन शक्तिमा कमी? – Health Post Nepal
किन आउँछ यौन शक्तिमा कमी?
२०७८ फागुन ६ गते १६:०८
काठमाडौं – मास्लोको सिद्धान्त अनुसार, यौन आवश्यकताहरू खाना र पानीजस्ता आधारभूत शारीरिक आवश्यकताहरू हुन्। यौन आवश्यकताको पूर्ति खुसी र सन्तुष्ट जीवन बिताउनको लागि निकै आवश्यक छ। त्यसको पूर्ति नहुनुले पनि व्यक्तिको कार्य सम्पादनमा बाधा पुर्‍याउँछ।
खराब आहार, रक्सी वा निकोटिनको अधिक खपत, व्यायामको कमी र तनावले पनि यौन असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ। कम यौन शक्ति वा यौन शक्ति गुमेका कारण निराश महसुस गर्न आवश्यक छैन। उचित उपचार, सही आहार र स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर यस समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।